बागलुङको गलकोट नगरपालिका-७ मल्मस्थित प्रगति आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा मतदान सकिएपछि मतपेटिका शिलबन्दी गर्दै कर्मचारी । तस्वीरः रामबहादुर थापा, रासस
देशभरको स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सकिएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५ ठाउँमा निर्वाचन स्थगित भएको छ ।
काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. १३, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको शीतलपुर मतदान केन्द्र, रामेछापको खाँडादेवी–१ राँकाथुम, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–३ गज्याङमा निर्वाचन स्थगित भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय तोकेको थियो । कतिपय स्थानीय तहमा मतदानका क्रममा विवाद हुँदा केहीबेर स्थगित भएको मतदान अहिले सुचारु भएका छन् ।
मतदान सम्पन्न भएको मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याउने काम भइरहेको आयोगले बताएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा तोकिएको स्थानमा नै आजै रातिबाट मतगणना शुरू हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
मतगणना शुरु हुनुअघि निर्वाचन अधिकृतले सर्वदलीय बैठक राख्नेछन् । सर्वदलीय बैठकपछि मतगणना शुरू हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।